Semalt ले वेब सामग्रीमा चोरीको प्रभाव वर्णन गर्दछ
२ चोरी भनेको के हो?
3 चोरी र उनीहरूको प्रभाव को डिग्री
काट्नुहोस् र टाँस्नुहोस्
।। तपाईंको वेबसाइटमा चोरीको प्रभाव
खोज ईन्जिन डि-रैंकिंग
सामग्री राजा हो, तर सबै सामग्री यो राजाको स्थिति दिन सकिदैन। अघिल्लो दशकदेखि, वेबमा सामग्रीको विस्फोट भएको छ। सामग्रीको लागि बढ्दो मागले सर्जनशीलताका लागि अझ कठिन कामको लागि मागलाई पूरा गर्न नवीन विचारहरू सिर्जना गर्न आवश्यक बनाएको छ।
यो, शीर्ष खोजी सामग्री बिना वेब साइटहरू कम खोज इञ्जिन श्रेणीकरणको समुद्रमा डुब्दछ भन्ने तथ्यसँग मिल्दोजुल्दो छ, वेबसाइटहरूले लगातार नयाँ सामग्रीहरू शीर्षमा रहनको लागि आवश्यक बनाएको छ। तर व्यक्तिहरू बिर्सन्छन कि यो इन्टरनेटमा सामग्री अपलोड गर्न पर्याप्त छैन; सामग्री आकर्षक, उच्च गुणवत्ता, र मूल हुनु पर्छ।
वेबमा अपलोड गरिएको सामग्रीको राम्रो प्रतिशतले गुगलले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो लाग्छ। यस प्रकारको सामग्रीको साथ वेबसाईटहरूको खोजी ईन्जिन स्तरहरूका लागि यो हानिकारक हुन सक्छ। दुर्भाग्यवस, धेरै व्यक्तिले वेब सामग्रीमा प्रभावहरू बुझ्न सकेका छैनन्। यस पोस्टले हेर्छ कि कसरी चोरी हो तपाईंको वेब सामग्री र वेबसाइटहरूलाई।
साहित्य चोरी अरूको लिखित मस्तिष्कको काम कसैको आफ्नै रूपमा पारित गर्ने कार्य हो। यो गलत कार्य हो किनभने यसले बौद्धिक सम्पत्ति चोर्दैछ। दुःखको कुरा, यो अभ्यास अब एकदम सामान्य छ, विशेष गरी इन्टरनेटमा।
नक्कल गरिएको वा चोरी गरिएको वेब सामग्री भ्रामक र हानिकारक पनि छ, त्यसैले तपाईंले यसलाई स्पष्ट रूपमा चलाउनु पर्छ। भाग्यवस, त्यहाँ बिभिन्न अनलाइन उपकरणहरू छन् जुन तपाइँ तपाइँको वेबसाइट र वेब सामग्री मूल हो भनेर जाँच गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कोपिसकेपको व्याकरण, व्याकरण, Semalt.net तपाईंको साइट र वेब सामग्री चोरी चोरी रहन्छ भनेर निश्चित गर्न चोरी चोरी र नक्कल सामग्री पत्ता लगाउने सेवाहरू प्रदान गर्नुहोस्।
Pla. साहित्य चोरी र उनीहरूको प्रभाव को डिग्री
वेब सामग्री चोरी चोरी भिन्न हुन सक्छ। केहि अविश्वसनीय रूपमा स्पष्ट छन्, जबकि अन्य डिग्रीमा निर्भर गर्न पत्ता लगाउन गाह्रो हुन सक्छ। जेसुकै भए पनि यदि यो स्पष्ट छ वा छैन तर, चोरी गर्नु भय a्कर कुरा हो, विशेष गरी इन्टरनेटमा। निम्नलिखित चोरीका केहि प्रकारहरू छन्।
प्याचराइटिंग भनेको साधारण चोरी हो जुन इन्टरनेटमा देखा पर्दछ। यो वास्तवमै "लेखन" बिना नै लेख्ने सब भन्दा छिटो र सुस्त तरीका हो। प्याचराइटिंग भनेको मूल लेखमा कताई गर्ने काम हो र यसलाई फरक देखिने गरी लेख्ने काम हो।
प्याच प्रतिलिपि अब नयाँ र समान समान प्रतिलिपिको रूपमा पठाइएको छ। यस कार्य स्पिनिंग सफ्टवेयरको प्रयोग बिना वा बिना नै सामग्री लेखोट द्वारा गर्न सकिन्छ। यदि पुनःप्रिलित प्रतिलिपि राम्रोसँग गरियो भने, यो चोरी चोरी कार्यको रूपमा झण्डा लगाईएको बिना नै चोरी गर्ने जाँचकर्ताको माध्यमबाट जानेछ; जे होस्, यो कार्य अनैतिक, हानिकारक र अवैध छ।
प्याचराइटिंगले एसईओ लाई धेरै असर गर्छ, तर प्रायः वेबसाइट अपरेटरहरू यस बारे अनजान छन्। किवर्डहरू एक प्रतिलिपि बनाउनको लागि सुधार गरिएको सामग्रीको प्रक्रियामा हराउने प्रवृत्ति भएकोले, खोज इञ्जिन श्रेणीकरण प्रायः गिर्दछ।
यस बाहेक, गुगल एल्गोरिथ्मले केहि कुरा मान्छे बाहिर निकाल्न सक्दैन। यसले सामान्यतया पत्ता लगाउँदछ कि यदि अपलोड गरिएको सामग्री अघिल्लो अपलोड गरिएको सामग्रीको प्याचराइटिंग हो। जब यो हुन्छ, गुगलले प्रतिलिपि गरिएको सामग्री भएको वेबसाइटलाई दण्ड दिन्छ।
जब खोज ईन्जिनहरूमा वाक्यांशहरू खोजी गरिन्छ, गुगलले माथिल्लो सामग्री राख्दछ जब प्रतिलिपि अन्तिम केहि खोजी परिणाम पृष्ठहरू वा "हटाइएका परिणामहरू" मा पठाइन्छ। गुगलले किन यस्तो गर्छ भन्नेमा तपाईलाई लाग्न सक्छ? यो किनभने यो विश्वास गर्दछ कि सुधारिएको सामग्रीको कुनै अर्थ वा मान छैन र प्राकृतिक रूपमा मूल सामग्रीमा राख्नु हुँदैन।
यस प्रकारको चोरीले नयाँ साइट बनाउन विभिन्न साइटहरूबाट सामग्रीको अंशहरू काट्नु र टाँस्नु समावेश गर्दछ। यस काट र टाँस्नु संस्करण त्यसपछि प्राकृतिक र मूल हेर्न मिश्रित छ।
कहिलेकाँही, यो नक्कल भेट्न सजिलो छ किनकि लेख्ने शैली अचानक समान सामग्री बीचमा परिवर्तन हुन्छ। यस्तो सामग्री अप्ठ्यारो हुन जान्छ किनकि ती विचारहरू र बिभिन्न व्यक्तिको विचारहरूको टुक्राहरू हुन्। कसरी काट्ने र टाँस्ने काम मिश्रित गरिएकोमा निर्भर गर्दछ, यसले वा साहित्य चोरी चल्न सक्छ वा गर्दैन।
यो देखाउनु पर्छ कि केस फरक छ यदि केवल वाक्यांशहरूको केहि स्ट्रिंग नक्कल लाग्छ। यदि स्ट्रिंग शव्दको मात्र एक नन्नि सानो प्रतिशत डुप्लिकेटको रूपमा आएको छ भने, यो हुन सक्छ किनभने सामग्रीका केहि अन्य टुक्राहरू उही विषयमा लेखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा, सम्भावना हुन्छ कि केहि समान वाक्यांश वा वाक्यांशको तारहरू देखा पर्दछ। अधिकांश चोरी चोरीहरूले सम्बद्ध शब्दहरू सँगसँगै डुप्लिकेट वाक्यांशहरू सहित लेखको मौलिकता निर्धारित गर्नका लागि विचार गर्दछन्।
प्याचराइटि inमा जस्तै, गुगलको एल्गोरिथ्म सजिलै संग चोरी चोरी काम भन्न सक्दछ एक पटक साइटमा अपलोड भएपछि। वास्तवमा, गुगल छनौट गर्न, काट्न र टाँस्न कामको लागि धेरै सजिलो छ, कुनै पनि अन्य प्रकारको चोरी भन्दा। एक पटक साहित्यिक चोरी पत्ता लाग्यो, एक खोज इन्जिन रँकिंग स्वीकृति हुन्छ। त्यस बाहेक, कट र टाँस्ने काम प्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकहरू र ग्राहकहरूको लागि सहज लाग्न सक्छ एक पटक तपाईंको सामग्री चोरी भयो भने।
यदि तपाइँको सामग्री तपाइँको जानाजानी नगरीकन अर्को प्रकाशित सामग्रीसँग मिल्दो छ भने दुर्घटनाको चोरी हुन सक्छ। यो मुख्यतया यस्तो हुन्छ यदि तपाईं एक विषयमा लेख्दै हुनुहुन्छ जसमा तपाईंलाई समान वाक्यांश वा शब्दहरूका तारहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दछ। यो पनि हुन सक्दछ यदि तपाईंको लेखन शैली र ढाँचा अन्य सामग्रीसँग अलि मिल्दो छ।
अरु के छ त? दुर्घटनात्मक रूपमा चोरी सामग्री तपाइँको हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई बिभिन्न वेबसाईटहरुका लागि समान विषयहरुमा लेख्नुहुन्छ भने, तपाईको लेखन शैली, बान्की र शब्दका समान प similar्क्तिहरू तपाईको अनुवर्ती लेखहरुमा पुन: अंकित हुने सम्भावना हुन्छ।
भाग्यवस, गुगलले लेखनको संदर्भको साथसाथ लेखोट पनि आफैंमा लिन्छ जब चोरी चोरी लिन्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईंको सामग्री चोरी चोरी दण्डबाट सुरक्षित हुन सक्छ। जे होस्, तपाईं मौलिकता सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईंको सबै सामग्री चोरीको जाँचकर्ताको रूपमा चलाएर सुरक्षित रहनु पर्छ।
नक्कल सामग्री वेबमा बारम्बार देखा पर्दछ; यद्यपि, गुगलले प्राय: पेनल्टी जारी गर्नु अघि प्रस the्गलाई ध्यान दिन्छ अर्को साइटबाट जानाजानी सामग्री नक्कल गर्नु चोरीको सबैभन्दा हानिकारक रूप हो। यो केवल गुगल द्वारा तपाईं कालोबाल प्राप्त हुनेछ, तर यो तपाईं ग्राहकहरु, ग्राहकहरु, र प्रतिस्पर्धीहरु संग विश्वसनीयता गुमाउन सक्छ।
केहि केसहरूमा तपाईले यसलाई कानूनी स्वीकृति लिन सक्नुहुनेछ। बाह्य साइटहरु लाई नक्कल गर्न को लागी, सामग्री को नक्कल तपाईको आफ्नै वेबसाइट को बिभिन्न सेक्सनहरु भित्र हुन सक्छ। नक्कल प्रायः उत्पादन र सेवा शोकेस सेक्सन, कल-टु-एक्शन अनुच्छेद, र मनपर्दोहरूमा देखा पर्दछ।
गुगलले वास्तवमा यस प्रकारको केसको सामान्यता बुझ्दछ, र यो सम्भव छ कि तपाईले यसका लागि कुनै प्रतिबन्ध लिनु हुन्न। जे होस्, त्यहाँ समस्या हुन सक्छ जब यो कार्य पुनरावर्ती हुन्छ। यसै कारणले तपाईंले आफ्नो सामग्रीको सबै टुक्रा सकेसम्म मौलिक बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ।
Your. तपाईंको वेबसाईटमा चोरीको प्रभाव
टप्नोच खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) र खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ (SERP) मात्र तब हुन सक्दछ यदि तपाईंको वेबसाइटमा आकर्षक, उच्च गुणवत्ता र मूल सामग्री छ। यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटको लागि चोरी सामग्री प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने यो हुन सक्दैन। तपाईंको वेब सामग्रीमा चोरीको ठूलो प्रभाव खोज ईन्जिन डि-रैंकिंग हो र, पछि कम अनलाइन दृश्यता। तर त्यस बाहेक, यदि तपाइँका ग्राहक र ग्राहकहरूले तपाइँको सामग्री चोरी भएको थाहा पाएमा, तपाइँ तपाइँको विश्वसनीयता र तिनीहरूसँग प्रासंगिकता गुमाउन सक्नुहुन्छ।
गुगलले राम्रोसँग चोरी चोरी गर्दैन, त्यसैले यदि तपाइँको वेबसाइट मा प्रकाशित सामग्री चोरी गरीएको छ, जानाजानी होस् वा छैन, तपाइँको वेबसाइट को चोट लाग्न सक्छ। खोज ईन्जिनसँग एल्गोरिदमहरू छन् जसले तिनीहरूलाई प्रतिलिपिहरू बाहेक मौलिक सामग्री बताउन सक्षम गर्दछ। मानिसहरूलाई नक्कल गरिएको सामग्री देखाउन चाहेको होइन, खोज इञ्जिनहरूले नक्कल गरिएको सामग्री खोजीको नतीजामा प्राय: तल राख्छन्।
यस तरिकाले, ईन्टरनेटमा जानकारी खोजी गर्ने व्यक्तिले मूल र जानकारीपूर्ण सामग्री पहुँच गर्दछन्, चोरी गर्दैनन् पुनरावृत्तिहरू जुन कुनै मान थप गर्दैन। यसको मतलब यो छ कि एक पटक तपाइँको वेबसाइट डि-र ranked्ग भए पछि तपाइँको वेबसाइटको अनलाइन दृश्यता र प्रयोगकर्ता ट्राफिक धेरै कम हुनेछ। यसले पक्कै पनि तपाईंको व्यवसाय राम्रो गर्न सक्दैन किनकि व्यक्तिले उनीहरू पहुँच गर्ने वेबसाइटहरूको केवल संरक्षक बनाउन सक्छन्, उनीहरूले देख्न नसक्ने वस्तुहरू होइन।
धेरै जसो पटक, चोरी र नक्कल सामग्री तपाइँको ग्राहकहरु र ग्राहकहरु, र प्रतिस्पर्धीहरु द्वारा खोज गरीन्छ, एक संभावना छ कि तिनीहरू एक दिन मूल सामग्री मा ठोकर र समानता नोटिस हुनेछ। प्रकाशित मितिले तिनीहरूलाई मौलिक बनाम चोरी सामग्रीको जानकारी गराउँदछ। यदि त्यसो भयो भने, यसले तपाईंको ब्रान्डमा विश्वास गुमाउन सक्छ र तपाईंले के प्रस्ताव गर्नुपर्दछ।
वास्तवमा, तीनिहरु तपाइँको वेबसाइट को लागी एक अन्तिम बिदा हुन सक्छ कहिल्यै नफर्कनु पर्छ। यसका साथै, यदि प्रतिस्पर्धी वा मूल सामग्री सिर्जनाकर्ताले चोरी गरेको सामग्री नोट गरे भने, तिनीहरूले यसलाई तपाईंको मुकुटमा मुद्दा हालेर वा तपाईंको ब्रान्डको सम्मान हराउन बेवास्ता गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्।
How. तपाइँको वेबसाइटमा मौलिक सामग्री छ भनेर कसरी पक्का गर्ने
कुनै पनि विषयमा लेख्नु अघि पढ्नुहोस् र विस्तृत अनुसन्धान गर्नुहोस्।
तपाइँको लेखन सुरु गर्नु अघि तपाइँको विचार र जानकारी विशेष शीर्षकमा भएको जानकारीको रूपरेखा बनाउनुहोस्।
तपाईले लेख्नु भएको सबै तथ्य र जानकारी प्रमाणित गर्नुहोस्।
सबै साइटहरू र स्रोतहरू सन्दर्भ गर्नुहोस् जहाँ तपाईं आफ्नो तथ्य र तथ्या .्कहरू पाउनुहुन्छ।
आफ्नो रचनात्मकता मा फेंक।
तपाइँको लेखन संग जानकारीपूर्ण हुनुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो सामग्री निर्माण आउटसोर्स गर्दै हुनुहुन्छ भने, सधैं राम्रो लेखकहरू पाउनुहोस् र तिनीहरूलाई राम्रो भुक्तान गर्नुहोस्। तपाईले तिर्ने पैसा पाउनुहुन्छ।
तिनीहरूको मौलिकता पहिचान गर्नका लागि र सामग्री जस्तो लाग्ने डुप्लिकेट वाक्यांशहरू र वाक्यहरू ठीक पार्न सँधै तपाईंको सामग्रीहरू चोरी चोर्सहरूको माध्यमबाट चलाउनुहोस्।
तपाईको सामग्री र वेबसाइटलाई समय समयमा विश्लेषण गर्नुहोस् कि कसैले पनि तपाईको सामग्रीको नक्कल गर्दैन। Semalt.net तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुने उत्तम सामग्री अद्वितीयता उपकरणहरू मध्ये एक छ।
तपाइँको वेबसाइट मा चोरी साहित्य को प्रभाव यति गम्भीर छ कि यसलाई कहिले पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन। वेबसाइट के हो जब यो खोज ईन्जिनहरूमा सायद देखिने गरीन्छ? वेबपृष्ठ के हो जब यसमा थोरै वा कुनै ट्राफिक छैन? जानाजानी वा दुर्घटनात्मक रूपमा चोरी गरिएको सामग्रीको चोट सामना गर्नबाट जोगिन, तपाइँले सँधै साहित्य चोरी गर्नु पर्दछ र विशिष्टता र मौलिकता पत्ता लगाउन तपाइँको वेबसाइटमा नियमित रूपमा एक चेकमा चलाउनु पर्छ।